VaMugabe naVaTsvangirai Vanotsigira VaMutambara Kuti Varambe Vari Mutungamiri weMDC Muhurumende
Chivabvu 12, 2011
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemutungamiri wehurumende, vaMorgan Tsvangirai vanonzi vakawirirana neMuvhuro svondo rino kuti mutewedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara varambe vakabata matomu muhurumende semumwe wevatungamiri vatatu vanoumba hurumende yemubatanidzwa.
Svondo rapera vari kumirira mapato ari muhurumende munhaurirano, pamwe neSADC vanonzi vakakomekedza muhwaro hwesarudzo kana kuti roadmap, kuti VaMutambara vamire kuve mumwe wevatungamiri vatatu vehurumende, nzvimbo yavo yotorwa naVaWelshman Ncube, avo vave kutungamirira bato reMDC raimbotungamirwa naVaMutambara.
Izvi zvaizoreva kuti VaMutambara vaizomira kupinda misangano yeMuvhuro yavanoita naVaMugabe pamwe naVaTsvangirai, uye mimwe misangano inopindwa nevatungamiri vemapato ari muhurumende.
Musangano weSADC Troika wakaitirwa kuLivingstone, kuZambia wakawirirana kuti VaNcube ndivo mutungamiri weMDC aizivikanwa nesangano reSADC, izvo zvakazoita kuti VaNcube vakokwe kumusangano uyu.
Mutauriri weMDC yaVaNcube, VaNhlanhla Dube vaudza Studio 7 kuti vagara vachiziva kuti ndizvo zvichaitwa nevatungamiri vaviri ava, vakati ivo sebato vakatokanganwa kare nezvaVaMutambara, uye vakatovapa kare kubato reZanu PF pachena.
Mutauriri wechikwata chiri kutsigira VaMutambara, VaMaxwell Zimuto vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshandura mamiriro akaita zvinhu muhurumende yemubatanidzwa, sezvo VaMutambara vari mumwe wevanhu vakanyora chibvumirano chekuumba hurumende yemubatanidzwa.
Hurukuro naVaMaxwell Zimuto